PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-30 - Gqokisa amabele ngendlela efanele
Gqokisa amabele ngendlela efanele
Ilanga langeSonto - 2018-09-30 - Izindaba - EZESIMANJE AYANDA BUTHELEZI ayandab@ilanganews.co.za
ININGI labantu besifazane kulezi zinsuku kalisakuthokozeli ukugqoka u- bra ngenxa yezizathu ezahlukene elizibekayo - kuzona esihamba phambili kuba wumuzwa wokungakhululeki kahle uma liwugqokile.
Abanye indlela abangakuthandi ngayo ukuwugqoka, baze basho ukuthi into yokuqala abayenza uma befika emakhaya, wukuwukhumula bawulahle le. Labo abanezimoto bona bathi bawukhumula besengaphakathi emotweni.
Yize u- bra uyimpahla yangaphansi eyisidingo, kodwa ungena kakhulu ohlwini lwezimpahla ezingama- accessory futhi ungenye yezimpahla ongeke nje uvele uyidumele uthi uyayithenga ngoba nakhu uyibuke wayithanda.
Uyefana nokuthenga izicathulo.
Kudingeka ubheke futhi uqonde izinto eziningi njengokwakheka komzimba wakho, usayizi wamabele akho nomzimba wakho, ngale kwalokho uyohlale uzizwa usetilongweni uze ungawuthokozeli. Kuyenzeka ukuthi kube nowesifazane othwala kanzima ukuthola izimpahla zangaphansi ezihambelana ngqo nomzimba wakhe. Ngokocwaningo, ukuqonda usayizi wakho ka- bra kunomthelela wokuba uzizwe uzethemba futhi uhehe uma uwugqokile. Eminyakeni edlule inkampani enkulu eyayihweba ngendwangu, iseardel, yasecape Town, yamemezela ukuthi iyavala. Isikhulu sakhona, ustuart Queen, sathi isizathu wukuthi kabayenzi inzuzo ngoba le mpahla idinga indwangu esezingeni eliphezulu futhi kuqashelwe nobuntofontofo bayo, kwazise ingokokugqoka okunamathela ne emzimbeni.
Wathi kuningi okumele kuqashelwe okungeke kube nomthelela wezempilo kumuntu owugqokile.
ZIKALE UMZIMBA WAKHO
ILANGA likhulume nonontobeko Zama, oyimenenja yesitolo esidayisa izimpahla zangaphansi, ibras N Things, esisandwa kuvulwa epavillion, othe kuningi okumele kuqondwe ngabesifazane uma kuziwa kokwangaphansi.
"Nathi njengezisebenzi kumele sibambisane nabo, sibeke phambili ukuthi sidayisa umkhiqizo oletha isisombululo nomuzwa othile, hhayi nje okokufihla umzimba," kusho yena.
Uthe okwenza abaningi besifazane bangakuthokozeli ukugqoka o- bra, yingoba kabawuqondi kahle usayizi wabo. Uthe kubalulekile ukuba umuntu azikale - okuyinto eyenziwa mahhala ezitolo eziningi ezidayisa izingubo zabesifazane zangaphansi.
"Kumele futhi wazi ukuthi hlobo luni luka- bra ohambisana nengubo ofuna ukuyigqoka. Kukhona abokuzivocavoca ( sport bra), abangenamabhande ( strapless), ongena khaxa ibele ( full cup), onesipontshi ( padded) nosekelwe ngocingo ( wired)," kusho yena.
Uthe okuhle ngo- bra wukuthi bangahlala iminyaka efika kwemihlanu uma bezonakekelwa ngendlela efanele.
"Kunezindlela zokunakekela u- bra kusuka endleleni owugcina ngayo nangendlela owuwasha ngayo. Kakufanele uwushuke uma uwuwasha futhi kakumele uwufake emshinini wokuwasha ngoba lokho kusheshe kuwugugise," kuqhuba yena.
IZIMPAWU EZIKHOMBISA UKUTHI UDINGA U-BRA OMUSHA:
Uma kuphakama ama- straps angemuva kubukeke sengathi uwutetile.
Uma unyukile noma unciphile ngesisindo somzimba ngokwemvelo noma uqeda ukuyobeletha noma usungena esigabeni se- menopause.
Uma u- bra wakho usunwebekile ikakhulukazi emabhandeni ngenxa yokuwashwa njalo noma ngenxa yokuthi usunesikhathi unawo.
Uma isipontshi eseseka amancence akho sesithambile noma ucingo selulunguza - valelisa kuwona.
Uma amabele eputshuka, wushintshe uphinde uyokala esitolo ukuthi uyimuphi usayizi.
O-BRA BANGAMA- ACCESSORIES
Njengayo yonke impahla yokugqoka ehambisana nesikhathi esithile, no- bra nabo kabasesiyo nje impahla yokufihla amabele kuphela, kodwa sebeyangena ohlwini lwezinto zokuhloba ( accessory).
1. Kulabo abangawuthandi u- bra, sekunezitikha ozifaka ngaphansi kwamabele bese ethi ukuphakama ame mpo.
Uma usufuna ukuzikhipha kulula, ubhixa i- baby oil bese ziyazisukela. Okubi nje ngazo ukuthi uzisebenzisa kanye kuphela.
2. Njengoba siqala ukufudumala isimo sezulu, abesifazane sebezoqala ukugqoka izingubo ezinemikhono eyimicu. Lezi zingubo zihambelana kahle nama- adhesive
cup, okuyizimpontshana ezihlala zithi ne emabeleni. Lezi zimpontshi ungazisebenzisa kuze kube yika-50 nangaphezulu.
3. Ukufihla izingono ezivamise ukuba yiqhutshana engubeni, ungathenga ama- silicone nipple covers ukuzifihla. Wona uwanamathisela engonweni futhi ungawasebenzisa izikhathi ezingu-50 na-ngaphezulu. Unontobeko ugqugquzele abesifazane ukuba bavakashele izitolo ezahlukene bayokalwa osa-yizi ukuze kubuye ukuzethemba nokukhululeka uma befake le mpahla yangaphansi.
KUBALULEKILE ukugqoka u-bra okulingana kahle, ungagcini usuwugqogqosha ngoba ungakuhleli kahle.
QINISEKA ukuthi irastiki ka-bra wakho isekahle, kayixegi okwenza ubukeke ugugile.
ININGI labesifazane lithi lifika nje endlini, litshinge le u-bra ukuze likhululeke.